नेपाली काङ्रेस | नेपाल डायरी डट कम
Posted by nepaldiary under नेपाल डायरी | Tags: टिप्प्णी, देश काङेस, नेपाल, नेपाल बन्द, नेपाली काङ्रेस, बन्द, ब्लग, राजनिती, राजनीति | LeaveaComment नेपाली राजनीतिको सबभन्दा पुरानो र धेरै समय सत्तामा रहेको र बलियो जनाधर पनि रहेको भनिएको पार्टी नेपाली काङ्रेसले नेपाल बन्द गरेरै छोड्यो । देश भित्र र बाहिरबाट अत्यन्त तिब्र बिरोध हुँदा हुँदै पनि काङ्रेस टसको मस भएन बन्द आयोजना गर्न । संभबत नेपालमा बन्द को बिरोध उठेको यो सबन्दा ठुलो स्वोर हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि किन हो काङ्रेसले आफुलाई पनि बन्द आयोजकको लहरमा उभ्यायो र अराजकता र तोडफोडमा उत्रियो ।
Share this:StumbleUponDiggRedditFacebookTumblrGoogle +1TwitterEmailPrintLinkedInLike this:Like Loading...	December 18, 2011
Posted by nepaldiary under नेपाल डायरी | Tags: देश, नेपाल, नेपाल बन्द, नेपाली काङ्रेस, बन्द, राजनीति | LeaveaComment आदरणिय शुसिल दा , नमस्कार !
बन्दको तयारीमा जोडतोडले लाग्नु भएको होला । फुर्सदै कहाँ होला र तपाईंलाई ? तैपनी प्रजातन्त्रमा अरुका कुरा पनि सुन्नु पर्छ, फरक मतको पनि कदर गर्नु पर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ भने यो एउटा सानो गुनासो सुनाउने जमर्को गरेकोछु , कृपया सुनिदिनु होला ।
शुशिल दा , उमेर निकै कट्यो तपाईंको , चुस्स परेका सेता दार्ही र फुलेको केश लिएर देस र जनताका लागि भनेर (तपाइकै शब्द हो यो देस / जनताको लागि राजनीति गरेको भन्ने ) राजनीति गरेको लामै समय भयो । नेपाली जनताको पिर मर्का , समस्या , दु:ख , दुर्दिन को बारेमा तपाईं भन्दा जानकार अरु को होला र हगी ? सधैं चिन्तित देख्छु , सोचमग्न देख्छु , देस र जनताको लागि नै त होला नि है , नत्र यसरी चिन्ता लिनु पर्ने अरु को नै छ् र तपाईं को ?
शुसिल दा , शिव पौडेल मारिए । दु:खलाग्दो कुरा हो यो । उनी मारिए , त्यो पनि जेल भित्र एउटा कैदी कुटी कुटी मारिए । देसमा शान्ती सुरक्षा र अमनचयन छ भनेर कसरी पत्याउने ? यस्तो नालायक सरकार छ कि देश मा जती निन्दा गरे पनि कम हुन्छ , यस्तो नालायक सरकार लाई सत्तामा / कुर्शिमा एक मिनेट पनि बस्ने अधिकार छैन । शिव पौडेल का परिवार लाई राहत दिनु पर्छ , दोशी लाई कारबाही कानुन बमोजिम हिनु पर्छ भन्ने मेरो र सबै आम नेपाली को माग छ । दोषी ले उन्मुक्ती पाउनु हुँदैन ।
आदरणिय शुसिल दा ,
मैले तपाईं लाई सम्झाउन आबस्यक त थिएन तर पनि सम्झाउने दुश्साहस गर्दैछु । शिव पौडेलको बारेमा आम धारणा त्यती सकरात्मक छैन । पत्र पत्रीका , रेडियो र टेलिभिजन मा आएको समाचार अनुसार उनी काठ तस्करमा मात्र होईन , हत्यामा समेत सम्लग्न अपराधी थिए र प्रहरिको खोर मा रहेका एक अभियुक्त थिए । फेरी भन्दैछु , उनी मारिए यस्को बिरोध गर्नै पर्छ तर उनी अपराधी पनि थिए यो पनि कटु सत्य हो । उनी गुण्डा को नाइके हुन भने कही बाट छुपेको छैन ।
शुसिल दा, हप्ता दिन पनि बितेको छैन , कैलालीमा चुलो छोएको निउुमा एक दलित युबकको कुटी कुटी हत्या भयो । तपाईं चुइक्क बोल्नु भएन, बोल्न आबस्यक पनि देख्नु भएन । तर जब शिव पौडेल मारिए , तपाईं बुर्लुक्क उफ्रिएर नेपाल बन्द गर्न तम्सनुभयो, तोड फोड मा उत्रनुभो र अराजक हुनु भो , यो किन शुशिल दा ? त्यो दलित तपाईं को कार्यकर्ता थिएन , त्यसैले त्पाइ चुप लाग्नु भा’हो ? के त्यो दलित नेपाली होइन , जस्का निमित्त तपाइको मन अलिकती पनि दुखेन ? जवाफ दिने हिम्मत छ तपाईं सँग ?
मैले यो पंती लेखिरहदा तपाईंहरु को मशाल जुलुस भरखरै सकिएको छ । भोली नेपाल ठप्प पार्ने ठुलो उदघोस् सहित । मैले भने तपाईं हरु को त्यो मशाल को राँको मा मेरो देश दनदन्ती , ह्वारह्वारी बलेको देखे शुसिल दा । तपाईं को नेपाल बन्दले भोली एउटा मजदुर ले खान पाउदैन , उस्को परिबारले भोलीको रात भोकै सुत्नु पर्नेछ । जाडो को याम छ ,त्यो रिक्सा चालक, त्यो मजदुर , त्यो भरिया , त्यो फुट्पाथ पसले , त्यो चना चट्पटेले यो जाडो मा भोकै पेट सुत्नु पर्नेछ भोली । यि गरीब र निमुका नेपाली प्रती अलिकती पनि सहानुभुति छैन तपाईंमा ? देस र जनताको लागि राजनीति गरेको भनेर नथाक्ने तपाईंका जनता को हुन ? सुकिला मुकिला , दुइछाक खान पुग्ने, ठुला शाहु मात्र तपाईंका जनता हुन भने मेरो भन्नु केही छैन तपाईं लाई । तर दिन भरी ज्याला मजुरी गरेर खाने पनि तपाईंको जनता , कार्यकर्ता हुन भने उनीहरु को भोको पेटले तपाईंलाई के आषिस देला र दाजु ?
तपाईंको बन्दले भोली एउटा बिरामी समयमा उपचार नपाएर मर्न सक्छ , उस्की जहान बिधवा हुन्छे र सन्तान टुहुरा हुन्छन । एउटा अबोध बाल्क ले बिद्या आर्जन गर्न पाउदैन , आर्थिक नोक्सानी को ठुलो कुरा नगरु दाजु , यहाँ खान लाउनैको ठुलो समस्या भएको बेला । एउटा ज्यामी खान नपाएर चिसो ले कठाङ्रिएर मर्न सक्छ , त्यस्को दोस तपाईं लाई लाग्छ कि लाग्दैन ? सडकमा टायर बाल्न लगाएर , ढुङ्गा मुढा गर्न युवाहरुलाई उक्साएर तपाईंले खै कस्तो नयाँ , शान्त र सुन्दर नेपालको परिकल्पना गर्नु भएको हो , मेरो सानो मस्तिस्कले भेउ पाउन सकेको छैन तर के चै मलाई थाहा छ भने त्यस्तो तरिका ले देस बन्दैन दाजु । बरु बिग्रछ । तपाईं ले देस र जनताका लागि , त्यो पनि सामान्य ज्यामी , मजदुर , शिक्षक , बेपारी , वकिल , कामकाजी सामान्य नागरिक , सेवा गर्ने कर्मचारि को लागि तपाईंले राजनीति गर्नु भएको हो भने यो अराजकता , तोडफोड र नेपाल बन्द बाट पार दिनुहोस् । शिव पौडेलको हत्यामा संलग्न हरु त जेल भित्रै छन , उनिहरुलाई कार्बाही गर्न दबाब दिने अरु पनि तरिका छन नि । सर्बसाधारण को गल्ती छ र नेपालै बन्द गरेर सर्बसाधरण जनताको हुर्मत लिनु ? नेपाल बन्द गरेर केही जितिदैन दाजु । बन्द त त्यो कुरा गर्नुस् जस्ले हाम्रो देश लाई, समाजलाई नराम्रो असर गरीरहेको छ । भ्रास्टाचार बन्द गर्नुस् , घुस्खोरी बन्द गर्नुस ,ढिलासुस्ती बन्द गर्नुस् , म्याद थप्न बन्द गर्नुस् , टायर बाल्न बन्द गर्नुस् । नेपाल बन्द बन्द गर्नुस् , जनताले मुरी मुरी आसिक दिनेछन । आगामी चुनाउ मा बहुमत त सरकार तपाईंकै बन्ला । :) सामान्य जनतालाई गरिखान दिनुस् सुशिल दा ! बन्द लाई सधैंको लागि बन्द गर्नुस् । अन्त मा अङ्ग्रेजी मा एउटा उखान छ Gray hair is not the sign of wisdom , it’s the sign of old age ! तपाईंको फुलेको केशमा यो उखान लागु नहोस् । बिकेक र बुद्धी ले काम लिनुहोस् । यो पोस्टमा केही स्क्रीन सट हरु छन । आज दिन भर सामाजिक सन्जाल फेसबुक र टुइटर मा बन्द को प्रतिक्रिया स्वोरुप लेखिएका ।
Share this:StumbleUponDiggRedditFacebookTumblrGoogle +1TwitterEmailPrintLinkedInLike this:Like Loading...	June 3, 2009
Posted by nepaldiary under नागरीक, नेपाल डायरी | Tags: कोइराला, गिरिजा प्रसाद, नेपाली काङ्रेस |  Comments जङेगेले जे बोल्यो -सो बोल्यो भन्थे रे जङग बहादुर, के काङ्रेस पनि कोइराला ले जे बोल्यो, बोल्यो-सदर गर्ने पार्टी हो ? ***************************
कसैले भन्थे -पहिला काङ्रेस पब्लिक थियो । २०४६ साल पछी लिमिटेड भयो । हाल आएर प्राइभेट लिमिटेड हुँदैछ । के काङ्रेस प्राइभेट लिमिटेड भए कै हो ? कुकुरको पुच्छर बार्‍ह बर्ष ढुङ्रामा राख्यो, ढुङ्रै बाङ्गो, भन्ने उखान नेपाली काङ्रेस कै लागि बनेको हो कि जस्तो भएको छ । नेपाली राजनतिका सबभन्दा ठुला “कल्प्रिट” गिरिजा प्रसाद कोइराला ले सरकार गठन गर्ने बिषयमा एउटा अर्को सकुनी दाउ हानेका छ्न । गिरिजा प्रसाद नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो बिर्ता ठान्छन र सुजता आफ्नो बाउको बिर्ता । के नेपाली राजनीति, नेपाली जनताको जनमत गिरिजा प्रसाद ले निर्णय गर्ने हो ? नैतीकता , इमान्दारि, सच्चाइ के नेपालको राजनीतिमा ‘ब्लु मुन’ भएकै हो ? कालो बादल मा पनि चाँदिको घेरा हुन्छ भन्थे , तर नेपाल को राजनीतिको कालो बादलमा चाँदिको त होइन, मैन बत्तिको धिपधिपे घेरा सम्म पनि देखिदैन । कालो,निलो बादल मात्र देखिन्छ । त्यस्को जड, उपजड, सुत्रजड गिरिजा प्रसाद हुन, मात्र गिरिजा प्रसाद । (more…)
SLC results ताजा समाचार भुतघरमा एक घण्टा कोइराला - अ लङ वे अफ फ्रीडम् तपाईंको पाना के सेनाले कु को तयारी गरेको हो ?
follow me @KakaBaa सोर्है आना सहि कुरा हउ काका । सोर्है आना ।3hours ago
RT @KakaBaa: @nepaldiary तिम्रो मेरो हैन :D अरु जो हुन सत्यतथ्य अलि गहिरो संग बुझेर समचार दिन परो हाम्रो अधिकार हो सही सूचना पाउनु :D कसो…3hours ago
RT @KakaBaa: @nepaldiary क्षमा माग्यो ? सच्याउन त पाइयो तर त्यो सम्चारले अफगानिस्तानमाँ आफन्त हुने नेपालीको मनमा कस्तो पीड़ा दियो ???3hours ago
@KakaBaa सेतो पाटी वास्तवमा कस्को हो काका ? कुरा त निकै ठुल्ठुला गर्छन् नि । हावाहावा कुरा पनि गर्छन् ।3hours ago
@KakaBaa होइन मैले त्यही कुरा उथाएको हो । गल्ती गर्नेले सच्याउनु पनि परो । सबैले ।त्यो सेतो पाटी ले माफि मागेन? त्यस्लाई पख्नुस् एकदिन ..:)3hours ago